Toekarena - magazine "Potato System"
Tena LOHATENY The Economy
Ny biraon'ny famoahana ny gazety "Potato System" dia namorona lahatsoratra iray momba ny fonosana maody sy legioma maoderina ao amin'ilay ...
Mihaona amin'ny fararano isika. Topimaso fohy momba ny toe-javatra eo amin'ny sehatry ny indostria.
Aleksey Krasilnikov, Tale Mpanatanteraky ny Vondrona ovy Miorina amin'ny angona avy any amin'ny faritra, azontsika atao ny mihevitra fa ny habetsaky ny fijinjana ovy ao ...
Roa mpamokatra pesticides Rosiana ny banky misy ny tany
Ny orinasa "Aogositra" dia mikasa ny hanitatra ny banky taniny manokana hatramin'ny 250 hektara ao anatin'ny dimy taona. Faritra vaovao ho an'ny fambolena ...
Ivontoerana vaovao fizarana bidy vaovao hitahirizana sy fonosana ny vokatra fambolena dia hiseho eny ambanivohitra
Ao amin'ny faritra Moskoa, kasaina hampihatra tetikasa fampanjariam-bola lehibe mitentina mihoatra ny 10 miliara robla hanitarana foibe fizarana ambongadiny ho an'ny fitehirizana, asa tapa-potoana, ...
Nankasitrahan'ny solombavambahoaka ireo tetikasa lehibe momba ny fambolena
Ao amin'ny faritany Krasnoyarsk, misy tetikasa lehibe maro eo amin'ny sehatry ny fambolena. Ny andro teo aloha, tao amin'ny tanànan'i Sukhobuzimskoye, ny lefitra lefitra Sergey Zyablov dia nanao saha ...
Ny ravin-kafody mivantana amin'ny fampidiran-drano dia manome vokatra fanampiny mihoatra ny 12 roubles
Ildus Gabdrakhmanov, lefitry ny minisitry ny fambolena sy ny sakafo ao amin'ny Repoblika any Tatarstan, dia niresaka ny momba ny famerenana ny tany miaraka amin'ireo mpamokatra fambolena. Mikasika ny fivoaran'ny irrigation any Tatarstan ...
Famokarana legioma sy ovy any Far Atsinanana. Fifanakalozan-kevitra momba ny toekarena momba ny fampandrosoana
Ny 12 martsa teo, nisy fivoriana natao tao amin'ny Ministeran'ny Fambolena Rosiana momba ireo olana amin'ny fanomezana ny mponina ny olom-pehezan'ny Far Atsinanana Federaly misy legioma sy ovy ary fepetra ...
Momba ny fahasarotan'ny mpamokatra ovy Okrainiana miditra amin'ny tsenam-bola eropeana
Nandritra ny fotoana ela dia tsy afaka nanondrana ireo vokatra vokariny ireo mpamokatra ovy Ukraine. Momba izany mandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ...
Azerbaijan dia mety handà ny ovy voatoto
Azerbaijan dia afaka mamboly ovy sahaza mba hanomezana ny tsena eo an-toerana sy hanondrana any ivelany. Niresaka momba izany aho ...
Lohataona vaovao, fanantenana vaovao
Tamin'ny talohan'ny fampielezana vaovao dia nanao fanadihadiana natao talohan'ny lohataona ny talen'ny famoahana ny gazety Potato System. Nanontany ny mpamokatra momba ny fambolena izahay momba ny vokatry ny vanim-potoana famaranana, olana, maika ...
P. 1 amin'ny 3 1 2 3 Next.
Nanohana ny kaoperativa momba ny fambolena ao amin'ny Faritra Sverdlovsk ny SME Corporation.